लकडाउनको समयमा कलस फार्मेसी इटहरीले अनलाइन सेवा सुरु - Saptakoshionline
प्रकाशित मिति: बिहिबार, बैशाख ०४, २०७७ समय: १२:२५:०४
इटहरीः लकडाउनको समयमा अत्यावश्यक भन्दा बाहेकका अवस्थामा घरमै बस्नु पर्ने हुनाले कलस फार्मेसी इटहरीले अनलाइन सेवा सुरु गरेको छ । सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को संक्रमणलाई फैलिन नदिनका लागि गरेको लकडाउनमा अनलाइनमार्फत सेवा सुरु गरेको हो । स्वास्थ्यमा समस्या आएको छ ? लकडाउनका कारण अस्पताल जान सक्नु भएको छैन? अब घरमै स्वास्थ्य सेवा पाइने भएको छ। तर अव चिन्ता नगर्नुहोस अनलाइनमार्फत घरमै कलस फार्मेसी इटहरीले औषधी तथा स्वास्य सेवा प्रदान गर्न थालेको छ ।
तपाईले कुनै रोगको नियमित औषधी सेवन गरिरहनु भएको होला । लकडाउनले घरबाहिर निस्कन नपाएर औषधी त सकिएको छैन ? कतिलाई लकडाउन भरी नियमित खानु पर्ने औषधी पाइएला कि नपाइएला भन्ने चिन्तापनि थपिएको होला । अब तपाईहरु सबैको चिन्ता दुर हुने भएको छ तपाईले सम्पर्क मात्र गर्नुहोस् आफुलाई चाहिने औषधीहरु तपाईको घरमै ल्याईदिन्छन् । कोरोना संक्रमणको त्राससंगै हाल जारी रहेको लकडाउनमा तपाई घर बाहिर निस्कन नै पर्देन । सो अनलाइन सेवाले हाललाई इटहरीमा निःशुल्क होम डेलिभरी प्रदान गर्ने छ । अब तपाइले अनलाइन बाट औषधी अडर गरेपछी तपाईलाई आवश्यक पर्ने औषधी तपाई बसेकै स्थानमा ल्याईदिने छ । यसका लागि अनलाइन www.kalashpolyclinic.com मार्फत सहयोग लिन सकिनेछ।